Vaovao - Jiangyin Puyang Heavy Industry CO., LTD
Rehefa raikitra ny fikarohana ny lesoka, ny detector lesoka, ny fahita matetika, ny probe sy ny sisa, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mampiasa ny fenitra mifandraika amin'izany, ka hamafana ireo fepetra ireo, ary ezaho ampifandraisina amin'ny mason'ny mpampiasa.
Ny fitadiavana ultrasonia amin'ny famonoana vatan-kazo lehibe, ny lesoka matevina kely mitovy 2 ~ 3 amin'ny maha-izy azy, ankoatry ny ampahany dia teboka fotsy, betsaka kokoa ny triatra bitika, faritra bitika, lavaka, lavaka ary hadisoana hafa.
Ny ankamaroan'ny lesoka dia misy fiantraikany amin'ny onja farany ambany, ary ny haben'ny fitaomana dia miovaova arakaraka ny natiora, ny habe, ny toerana ary ny làlan'ny lesoka. Ny fitsinjarana matevina ny teboka fotsy sy ny fampidirana azy dia misy fiantraikany amin'ny onja ambany, fa amin'ny ambaratonga samihafa. Ny taratry ny teboka fotsy dia avo, ary ny transmittance ny fampidirana dia avo. Noho izany, ny fanalefahana ny teboka fotsy mankany amin'ny onja farany ambany dia lehibe kokoa noho ny fampidirana. Eo ambanin'io fahatsapana io ihany, ny onja marobe misy teboka fotsy dia mihena haingana ary mampiseho fotoana vitsy. Ny onja farany ambany amin'ny fidirana dia mihena miadana mandritra ny fotoana maro. Satria ny teboka fotsy dia kilemaina mitresaka, dia hampihena ny fahatsapana ny fahitana izany. Milatsaka tsimoramora ny onjan-kilasy raha milatsaka haingana kosa ny onja any ambany.
Vaky ny fampidirana bebe kokoa amin'ny fisian'ny rivotra, ny rivotra dia filaharan'ny haben'ny fiakarana akora eo amin'ny 10 toradroa, ary ny fiakaran'ny akoran'ny akora vita amin'ny metaly manana habe eo amin'ny 10⁶ eo, ny fahasamihafana hita amin'ny toetra mampiavaka ny rivotra sy ny metaly. . Ny fari-tany eo anelanelan'ny triatra sy ny fotony dia fari-tany malefaka.
Amin'ny alàlan'ny famakafakana ny fielezan'ny onja ultrasonika amin'ny salantsalany sy ny toetra mampiavaka ny lesoka anatiny amin'ny fametahana lehibe, dia azo jerena fa ny toetra mampiavaka ny kileman-toetra samihafa dia azo sokajiana ho sokajy roa.
(1) Koa satria ny fampidirana (sombin-kazo) sy ny singa hafa dia oksida matetika an'ny Si, Al, Fe, sns., Dia azo lazaina fa ny fampidirana vy tsy vy amin'ny vy dia endrika entona misy amin'ny vy. ao amin'ny impedance mampiavaka ny acoustique dia kely noho ny matrix impedance acoustique, ary noho izany ity karazana kilema ity sy ny fetran'ny akoran'ny substrate dia azo heverina ho fari-tany "malefaka", dia ny triatra, ny flake, ny lavaka mitete, ny rivotra mibontsina, ny fampidirana volamena ary mamita ny fetra dia an'ny "malefaka" fetra, olona mitsivalana ultrasonika voatifitra tamin'ity karazana interface d'aucho fiovana dingana ity dia 180 °.
(2) Ny faritry ny fampidirana metaly avo lenta dia an'ny fetra "mafy", ary ny fizotran'ny riandrano taratra raha ny onjan'ny ultrasonika dia misy tsangana eo amin'io interface io dia mitovy amin'ny an'ny onja taratra olombelona. Ny fampidirana vy dia tungsten, molybdenum sns. Ny impedance acoustic an'ny tungsten dia manodidina ny (83,2 ~ 104,2) x 10 imp, ny impedance acoustique molybdenum dia 63,8 x 10 ⁵, ary ny impedance acoustique ankapobeny (39.4 ~ 45.6) x 10 ⁵ , noho izany ny karazana metaly avo lenta ny impedance akustika dia lehibe kokoa noho ny fanamafisana ny fiakaran'ny akoran'ny akora substrate, io karazana kilema io sy ny fari-tanin'ny akoran'ny substrate dia azo heverina ho fetra "mafy". Ho an'ny triatra, teboka fotsy, lavaka fihenan-doha, bubble ary fampidirana tsy metaly, ny taratr'izy ireo sy ny fandefasana azy dia azo isaina na dia eo aza ny impedance akustika samihafa, izay taratry ny haavon'ny fihenan'ny mari-pamantarana ny echo ultrasonic. Ny tsy fitovizan'ny impedance akustika eo amin'ny fampidirana tsy metaly sy ny vatan'ny matrix no kely indrindra, ary avo ny fifindrana. Noho izany, ny fihenan'ny akony amin'ny fampidirana tsy metaly dia tena matotra, izay mampiseho fa ny amplitude onja ambany dia kely na koa tsy misy onja ambany mandritra ny fikarohana. Ny onja taratra taratra fotsy dia matanjaka tokoa, saingy satria miseho amin'ny tarika maromaro izy io dia mazava sy mifangaro ao anaty ny detection ny endrika onja. Ny onjan'ny taratry ny kileman-kapoka dia mahery sy tokana, mazava be. Noho ny habetsaky ny fampidirana manodidina ny tsy fetezan'ny lava-kazo sy ny hamafin'ny tampon-trano dia hanana fihenan-danja lehibe ny onja taratra.